दशैंमा सासुको हातबाट पाएको त्यो दक्षिणा मेरो जीवनकै धेरै रकम थियो
Tuesday, 8 Oct, 2019 7:03 AM
काठमाडौं, २१ असोज– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा दशैको खासै तयारी छैन । सबै परिवारसँगै बसेर प्रचण्डले परार साल दशैं धुमधामसँग मनाएका थिए । जनयुद्धकालदेखि दशैंको टीका बहिष्कार गर्दे आएका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि दशैंको टीका लगाएका थिएनन् । परारसाल परिवारका सदस्यलाई टीका लगाइदिने मात्र होइन, आफूले पनि दशैंको टीका जमरा ग्रहण गरेका थिए । झण्डै दुई दशकपछि उनले दशैंको टीका लगाएकोे उनका छोरा स्वगीय प्रकाश दाहालले त्यस बेला सामाजिक सञ्जालमा तस्विर पोष्ट गरेपछि सबैलाई यसबारे जानकारी भएको थियो ।
प्रकाश दाहालको २०७४ मंसिर ३ गते हृदयाघातका कारण निधन भएपछि घरमा चाडवाडको उत्सवमा कमी आएको मन्त्री बीना मगर बताउँछीन । उनको विवाह पछिको परिवारसँगको पहिलो दशै मात्रै भएर होइन, परारको सालको दशै सवैका लागी विशेष थियो । परार सालको दशै स्मरण गदै मन्त्री बीना भन्छिन, त्यस बेला प्रकाशजीको अंकल गंगा प्रसाद दाहाल विदेशबाट धेरेै समयपछि नेपाल आउनुभएको थियो । दशैंको समय सबैले टीका लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो । अनि ममीले सबैलाई टीका लगाईदिनुभयो । ठुलो भएपछि मनाएको दशै नै परार सालको दशैं हो । किनभने सानो छँदा गाउँघरमा मनाइयो, त्यस्तै ६ कक्षासम्म पढथे होला । त्यसपछि जनयुद्धमा लागियो, दशै चाडवाडको महत्व नै भएन । जनयुद्ध र विवाहपछिको सबैभन्दा सम्झन लायक दशै त परारको नै हो ।
यतिबेला बीना खानेपानी मन्त्री छन् । दशैको दक्षिणाको खासै लोभ लाग्दैन उनलाई तर परारको साल सासुले दिएको दक्षिणा अहिले सम्मकै दशैंको सबैभन्दा ठुलो दक्षिणा भएको उनी सम्झिन्छन् । बीना भन्छिन्, ममीले दशैंको टीका लगाइदिदै तिमीलाई राम्रो हवस, सोचेको पुगोस भन्दै हजारको नयाँ नोट झिकेर दिनुभयो, यति दक्षिणा मैले कसैबाट पाएको थिएन सासुको हातबाट पाएको त्यो दक्षिणा मेरो जीवनकै धेरै रकमको दक्षिणा थियो । उनले सासु सीता दाहालको प्रसंसा गदै भनिन, ममी यति सहज हुनुहुन्छ की उहाँ परम्परावादी, रुढीवादी भन्दा धेरै माथी हुनुहुन्छ । हामी भन्दा त उहाँ धेरै प्रगतिशिल हुनुहुन्छ । विवाह गरेर आइसकेपछि बुहारी नै भएर बस्नुपर्ने त्यस्तो केही बाध्यता छैन । म आफैलाई कहिले काही महसुँस हुन्छ के म अलि बढि नै कन्जरभेटिभ छु की ?
यसपाली चाही ममिको हेल्थ अलि राम्रो छ । ममी कमजोर परिदिदा कहिले काही परिवार परिवार नै नभएकोको जस्तो हुने । ममी स्वस्थ्य हँुदा खाना खाएन भने फोन गर्ने, कहाँ छौ ? किन खाना खाएनौ ? भन्नुहुन्थ्यो । आजभोली सुतिरहनुहुन्छ । यो एकदमै मिस गछौ । बिहान खाना खान आएन भने किन आएनौ ? छिटो आयोे भन्नुहुन्थ्यो । अहिले एउटा अभिभाबक थला पर्दा घरमा एक किसिमको शुन्यता, खल्लोपन, के नमिल्या जस्तो महसुस भइरहेको छ ।
यसबर्षको दशैपनि ममीले टीका लगाउ भन्नुभयोे भने लगाइन्छ नत्र लगाइदैन । दशैंकै लागि भनेर अस्ति छोराहरु प्रणव र प्रसिद्ध अनि भान्जीलाई दिदी र म गएर सपिङ्ग गरिदियौं । दशैमा खानपिन, आफन्त भेटघाट, चाडपर्वका सन्दर्भमा पाइने विदालाई पारिवारिक जमघटमै समय विताउछौं किनभने अरुबेला कसैसँग समय हुँदैन । दशैंको विदालाई हामी आराम गर्नेै समयका रुपमा पनि लिन्छौ ।